श्रीमानले सुन्दरताको तारि नगर्दा रिसाइन् आँचल, कम बोल्ने उदीपले कार्यक्रममै लेखे यस्तो चिठी ?(भिडियो हेर्नुस्) – Kavrepati
Home / मनोरंजन / श्रीमानले सुन्दरताको तारि नगर्दा रिसाइन् आँचल, कम बोल्ने उदीपले कार्यक्रममै लेखे यस्तो चिठी ?(भिडियो हेर्नुस्)
admin June 22, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 145 Views
काठमाडौं । नायिका आँचल शर्माले विवाह गरे लगत्तै लकडाउन सुरु भयो । उनी विवाह पछि पुरै समय परिवारका साथमा बिताइन् । श्रीमानसंग टिकटक बनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट पनि गर्थिन । अब भने विस्तारै उनी बाहिर खुल्न थालेकी छन् । उनीहरुले एउटा कार्यक्रममा संगै देखिए ।
उनीहरुले विवाह पछि आफुहरुले विताएको समयका बारेमा खुलेर बताएका छन् । उदीपले प्रशंसा नगरीदिँदा आँचललाई अलि नराम्रो लाग्छ । कार्यक्रममा आउँदा पनि त्यस्तै भयो, म निकै मेहनत गरेर तयार भएँ तर मलाई हेरेर उदीपले केही नभनेपछि रिस उठ्यो नी ? गाडीमा बसेपछि मैले भनेँ के हो केही मतलब नै छैन ? उनले उदीप निकै कम बोल्ने गरेको बताइन् ।
तर उनका दिदी बहिनी भने निकै रमाइलो रहेको आँचलको भनाई छ । आँचलले आफू बिहेपछि झनै विन्दास र भित्र बाट खुलेको बताएकी छिन् । लकडाउनको समयमा जीम जाने, मन परेका परिकार खाने र परिवारसँगै समय बिताएको बताउने आँचल लकडाउन खुलेपछी भने म्यूजिक भिडियोको छायांकनमा रमाउन थालेकी थिइन्।
तर फेरी दोस्रो लडकडाउन पछि उनीहरु घरमै छन् । आँचल खुशी हुँदै भन्छिन् –‘मलाई त धेरै फ्यानहरुले बिहेपछि अनुहारमा झनै चमक कसरी आयो भनेर प्रश्न सोध्नुहुन्छ । म आफूलाई भने उस्तै छु जस्तो लाग्छ ।’
Previous कोठा नदिएको भन्दै घर@बेटी लाई मु”द्धा हालेपछि, अब घरबेटी संघले सबैको कोठा खाली गर्ने ध@म्की !
Next भाग्यले बाचेका यी ब्यक्ति जसले आफ्नै आखा अगाडी साथीभाईलाई गुमाए तर आफु भने यसरी बच्न सफल भए , हेर्नुहोस् त्यो दिन के भएको थियो ?